भोली आमाको मुख हेर्ने दिन, यस्तो छ आमाको महिमा: आमालाई माया गर्नेहरुले १ लाइक १ शेयर गरौ ! – Amareet.com
भोली आमाको मुख हेर्ने दिन, यस्तो छ आमाको महिमा: आमालाई माया गर्नेहरुले १ लाइक १ शेयर गरौ !
by amargeet May 3, 2019, 3:50 pm 2k Views
‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’
‘कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति’
उल्लेखित संस्कृत श्लोकहरुले आमा अर्थात मातृ महिमा बोकेका छन् । आज वैशाख कृष्णपक्षको औंसी- यिनै महिमा बोकेकी आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात मातातीर्थ औंसी । शास्त्रहरुमा आमालाई पिताभन्दा उच्च स्थानमा राखिएको पाइन्छ । यसरी श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गरिएकी आमालाई मिठो खान तथा राम्रो लगाउन दिई छोराछोरी हरुले आमाबाटशुभ आशिर्वाद ग्रहण गर्ने चलन छ । आमाप्रति विशेष भक्ति र भावयुक्त सम्मानगरिएको हुँदा यस दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिन भनिन्छ । यस घडिलाई मातातिर्थ औंसी, मातृऔंसी एवं मातृ दिवस पनि भन्ने गरिन्छ । मातातिर्थ औंसीको दिन आमाप्रति सम्मान र आमालाई सम्झनेदिन हो ।
बिहान सबेरै उठी स्नान गरी आमालाई उपहार प्रदानगर्ने, मिष्ठान्न भोजन खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशिर्वाद लिने गरिन्छ । आमाबाट टाढा रहेका सन्तानहरु आमा लाई भेट्न पुग्छन् । आमालाई मीठा खानेकुरा खुवाउँछन् । विवाह गरेर पतिका घर गएका चेलीबेटीहरु मिठा परिकारहरु सहित आमाघर अर्थात माइतपुग्दछन् । विभिन्न कारणले आमालाई भेट्न नपाएकाहरुले भने संचारका साधनहरु मार्फत पनिसम्झने गर्दछन् ।
मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालहरुका माध्यमबाट पनि आमाप्रतिका भावनासम्झनाहरु व्यक्त गर्दछन् । पौराणीक कालदेखिनै मनाउदै आएको यस आमाको मुख हेर्ने दिन आमाले गरेका महान् र कष्टपूर्णकामहरुको सम्झना गरिन्छ । आमा नभएकाहरूले पनि आमाको आत्माको मुक्तिको कामना गर्दै आज श्राद्धतर्पण गरी मातृत्वको स्मरण गर्दछन् । काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले भने भक्तपुरको हनुमानघाट पुगी आमाको सम्झनामा परम्परा अनुसार श्राद्ध तर्पण गर्दछन् ।
तपाँई पनि आमावाट पर हुनुहुन्छ भने एकफेर आमालाई फोन गरेर आवाज सुन्ने पो हो कि ? या आमाको याद अनि स्मरण गर्दै साथीभाईसँग आफ्नी आमाको वर्णन र स्नेहको वृतान्त सुनाएर आमाको याद ताजा गर्ने पो हो कि ? जे गर्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुहोस्, जगतको भलो होस्, आमाको माया र वहाँले खुवाउनुभएका दुधका धर्साहरु प्रति हामी वफादार र ईमान्दार हुन जरुरी छ ।
मातातीर्थ औंसीका दिन काठमाडौंको थानकोट नजिकै अवस्थित मातातीर्थमा धुमधामका साथ मेला लाग्ने गर्दछ । तिर्थाटनमा सहभागीहरुले मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गर्दछन् । जनश्रुति अनुसार पहिले मातातीर्थमा गोठालाहरुले गाईवस्तुहरु चराउने मैदान थियो । एक दिन त्यो मैदानमा एउटा गोठालाले फ्याँकेको रोटीको टुक्रा अनाचक हराउन पुग्यो । त्यो घटनाले गोठालाहरु अचम्मित भए । गोठालाले पुनस् अरु रोटीका टुक्राहरु पनि फ्याँके । ती टुक्राहरु क्रमशस् हराउँदै गए । ती गोठालाहरु मध्ये एउटाको आमा थिइन् भने अरुका आमा थिएनन् । तर आमा हुने गोठालाले फालेको रोटीको टुक्रा भने हराएनन् ।
आमा नहुने गोठालाहरुले फ्याँकेका रोटीका टुक्रामात्रै हराए । उक्त दिन बैशाख कृष्णपक्ष औंसी थियो । यो कुरा अरु गाउँलेहरुले पनि थाहा पाए । गाउँलेहरुले उक्त दिन मृत्यू भइसकेका आमाले छोराछोरीले दिएका चिज खाँदारहेछन् भन्ने विश्वास गरे । हरेक बर्ष उक्त औंसीका दिन मातातीर्थको चौरमा आमाको मृत्यू भइसकेकाहरुले विभिन्न मिष्ठान भोजन लगि चढाउन थाले । पछि त्यहाँ एउटा कुण्ड समेत बनाइयो र मातातीर्थका नामले प्रचलनमा ल्याइयो । यसरी हरेक बर्ष आमा नहुनेहरुले मातातीर्थमा गई त्यहाँको कुण्डमा नुहाउने र मृतक आमाका नाममा मीठामीठा खाद्यपदार्थ चढाउने प्रचलन कायम भयो । आमाप्रतिको श्रद्धास्वरुप मातातीर्थमा ‘साझा आमा’ को मूर्ति समेत स्थापना गरियो ।
Singapore bars travellers from Nepal, Bangladesh and Pakistan.
by amargeet May 11, 2021, 5:02 am
Paragliding pilot divulged to be de**ad as soon as he was taken to Pokhara Based Hospital, Passenger inaserious condition!
by amargeet November 24, 2020, 8:54 am
Rakul Preet Singh’s Beach look! (Photo Feature)
by amargeet November 24, 2020, 8:18 am
Today’s Horoscope: Tuesday 24th November 2020 (Watch Video)
by amargeet November 24, 2020, 6:56 am
Previous article नेपालकै सबै भन्दा सस्तो पसल जहाँ १० रुपैयामै छानि-छानि कपडा, किन्ने ग्राहकको भीड ( हेर्नुस भिडियो सहित )
Next article केटीको निहुँमा ललितपुरको पुल्चोकमा ग्याङ फाइट, एकको मृत्यु ( हेर्नुस लाइभ भिडियो )
Actress Shweta Khadka mehendi ceremony ( Photo feature )
Today’s Horoscope: Thursday 12th November 2020 (Watch Video)
by amargeet November 12, 2020, 6:12 am
विवाद पछि मिडियामा आए बिराज भट्ट : भन्छन् म रियलमा पनि मान्छे कुट्छु, १ ,२ जना तह लगाउनु पर्छ ( भिडियो सहित )
by amargeet May 3, 2019, 3:17 pm
पथरी रिना काण्डको बास्तबिकता बाहिर आएरै छाड्यो,कमल नेपालको अगाडीकै प्लान यस्तो डरलाग्दो (हेर्नुहोस कुराकानी)
by amargeet May 4, 2019, 3:01 pm
Watch an exclusive interview with Aanchal Sharma and Pusp Khadka! (Photo/Video Feature)
by amargeet April 27, 2019, 3:52 pm
‘मेरी बास्सै’ छोडेपछि बल्छि नयाँ शूटिंग – शूटिंग मै यस्तो रमाइलो ( भिडियो )
by amargeet April 27, 2019, 3:27 pm
Neha Kakkar weds Rohan Preet Singh
Neha singing songs
Neha Kakkar bollywood songs
Neha Kakkar in Nepal
Neha Kakkar and Rohan Preet Singh Honeymoon
Tom & Jerry 2020
Vietnam Gold Hotel
World first gold plated hotel
Kajal Agrawal Weds Guatam Kitchlu
Businessman Gautam Kitchlu
Kajal Agrawal Honeymoon Diaries
Kajal Agrawal Honeymoon at Malvides
Nurse died due to COVID-19
Ae Mero Hajur 3
Lai Lai song
Youtube Trending 1
India Chhat Puja
2020 Chhath Puja
Amazing facts about Chhath Puja
Kagal Agrawal Honeymoon
Rakul Preet on her holiday
Kareena Kapoor Khan Pregnancy News
Kareena Kapoor Khan expecting for second baby
Actor Saif Ali Khan
Bharti Singh husband Haarsh
Bharati Singh and her husband Haarsh got arrested
Hot Avatar of Nepali Actresses
Barsha Siwakoti hot avatar
Barsha Siwakoti viral
Sana Khan contestant of big boss
Sana Khan quit bollywood
Rakul Preet Singh at Maldives
Rakul Preet Singh Holiday with her family
by amargeet December 7, 2020, 5:06 am